Politika famerenam-bola | Visa an-tserasera India
Ny famerenana amin'ny laoniny ny saram-panjakana dia ho zahana amin'ny mpampiasa rehetra raha tsy efa namboarina ny fampiharana ary tsy feno. Ireo izay nanao ny fangatahany taminay raha sendra ekena / holavin'ny Governemanta ny fangatahanao dia tsy misy vola aloa. Ny famerenana amin'ny laoniny ampahany dia tsy atao raha tsy mbola feno ny fangatahanao ary tsy nakarina ny antontan-taratasy.
Raha vantany vao nanolotra ny fangatahanao taminay ianao, dia raisina sy ekena fa hanomboka ny fizotran'ny fandefasana ao anatin'ny fe-potoana voalaza mandritra ny fangatahanao izahay. Raha manapa-kevitra ny hangataka famerenam-bola ianao aorian'ny nanolorana ny fangatahanao sy nahavitana azy, dia azonao atao ny mangataka mba hodinihina amin'ny fahazoana ny famerenam-bola ny saram-pitsarana fangatahana maso ivoho. 69 $ - 79 $ dia hesorina ary omena vola raha tsy mbola napetraka amin'ny Immigration, Governemanta India ny fangatahanao.
Raha te hangataka vola ianao, mandefasa anay amin'ny info@evisa-india.org.in manondro ireto manaraka ireto:
Ny anton'ny fangatahana.
Ny anaranao feno (araka ny hita ao amin'ny pasipaoronao).
Ny kara-panondro momba anao.
Ny mailaka nampiasaina mba hanaovana fisoratana anarana ao amin'ity tranokala ity.
Raha mila fangatahana marobe, azafady manondro ireo karatra momba ny referrisy rehetra.
Ny fangatahana famerenam-bola dia hodinihina ao anatin'ny 48 ora.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao, azafady manondro ny: